प्रतिष्ठित व्यापारीका नाममा मुलुक खोक्रो पार्ने मेसो ! छानबिन गर्न पनिगाह्रो किन ?
रोशन कार्की ,
नेपालमा पहुँच र पैसा हुनुपर्छ, माथिकालाई सेटिङ मिलाएर जनता जति लुटे पनि हुन्छ । लुटको साम्राज्यमा को को होलान खेलाडी भन्ने भ्रम पाल्न आवश्यक नै छैन् । नेपालमा एक से एक नाफाखोरहरुको विवरण यसअधि पनि सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाललाई कर्मक्षेत्रको रुपमा प्रयोग गर्दै बैंद्य अबैंद्य कारोबार गरेर देशलाई लुट्न सफल घरानीय व्यवसायीहरु अहिले देशको अर्थतन्त्रनै ढुबाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
आफुलाई विश्वको धनीको सूचीमा रहेका चौधरी ग्रुपको प्रमुख विनोद चौधरीले देशमा सक्दो कर छली गरेर अर्वौैं रुपैयाँ कमाएपनि उनी नेपालको कर विवरणको सूचीमा भने अन्त्य तिर रहेको छ । उनले सरकारी कर्मचारीलाई कमिशन र मासिक तलव कै व्यवस्था गरेर नक्कली कर विवरण बुझाएको कागजात अर्थमन्त्रालयमै बसेर तयार गर्ने समेत गर्र्दै आएका छन् ।
मासिक ३ लाख रुपैयाँ दिएर चौधरीले तयार पारेको कर बुझाएको विवरण पत्रमा सरकारी छाप र सहि अर्थमन्त्रालयभित्रै लगाउने गरेका छन् । सो कार्यमा बहालवाला अर्थसचिब, राजस्व सचिबले मुख्य भुमीका खेल्ने गरेका छन् ।
ज्योति ग्रुपको नेपाल जनरल मार्केटिङका मालिक अभिक ज्योति पनि कर छली गर्र्दै देशको अर्थतन्त्र ढुवाउने खेलमा लागेका छन् । हिरो कम्पनीको मोटरसाइकल अत्याधिक मंहगोमा बिक्री गर्र्दै आएका छन् भने सो कम्पनीले मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट), आयकर र राजस्व समेत नक्कली विलमार्फत कारोबार गर्ने गरेका छन् । सो नक्कली विलबाट अबैध कारोबार गर्न सिकाउने गुरु हुन चौधरी समुह ।
चौधरी, ज्योति, गोल्छा, खेतान ग्रुप हाम्रो देशको प्रतिष्ठित कम्पनीको रुप लिने गरिन्छ । यि नै समुहले देशमा सक्दो सरकारी सुबिधा लिएका छन् । उनीहरुले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको कर भने नगन्य रुपमा रहेको छ ।
यो प्रतिष्ठाको साम्राज्य लुटको पृष्ठभूमिमा टिकेको पाइएको छ । मन्त्री र अनुगमनमा आउनेलाई मिलाएपछि जति मुनाफा राखेर कारोबार गरे पनि सरकारले अहिले सम्म कारबाही गर्न सकेको छै । अधिकाशं बस्तुको उत्पादन गर्ने चौधरी समुहले विश्व बजारमा आफ्नो उद्योग स्थापना गरेपनि देशमा भने राजस्व छली गर्नमै माहिर मानिन्छ ।
नेपालमा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राख्नु कालोबजारी हो भनेको छ । तर नेपालका घरानियका कम्पनीले उत्पादन गर्ने बस्तु र बिक्री गर्ने सवारी सधानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा राख्दै उपभोक्तालाई लुटी रहेका छन् । उपभोक्तालाई लुटेर जम्मा गरेको अकुत सम्पत्तिलाई गैरकानूनी तबरबाट विदेश लैजादै गरेका छन् । सबैजसो ब्रान्डमा अनुचित मुनाफा राखिएको छ ।
यो धन्दा वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ । वर्षांैदेखि सञ्चालन भइरहेको तर हालै सार्वजनिक भएको मात्रै हो । नेपालमा यसरी धन्दा चलाउने गिरोह नै रहेको पनि रहस्य खुल्दै आएको छ । चौधरी समुहलगायत अन्य समुह मिडियासँग फेस गर्नै समेत चाहादैनन् । लुटको यस्तो साम्राज्यबारे आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले समेत थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिए पनि कारबाही गरि हाल्न भने सकेको छैन ।
राजस्व कर छलीमा चौधरी ग्रुपको नाम नै काफी छ । अरु परिचय चाहिँदैन् । उद्योग वाणिज्य महासंघको पूर्वअध्यक्ष समेत भई सकेका विनोदले पुनः महासंघको नामबाट अबैध करोबारलाई निरन्तरता दिन खोज्दा अध्यक्षमा हारेपछि रातारात नेपाल उद्योग परिसंघ गठन गरि अध्यक्ष समेत बनेका चौधरीको अधिकाशं धन्धा अबैध कारोबार गर्ने र सरकारी ढुकुटीमा बुझाउनु पर्ने कर राजस्व नक्कली विलबाट ठगी गर्ने नै रहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वाइवाई चाउचाउ र अन्य उत्पादनबाट माकिस अर्बको कमाई गर्ने चौधरी गु्रपले आयकर र भ्याट भने नगन्यमात्रामा बुझाउदै आएको छ ।
औद्योगिक घरानाको रटान लगाएर रोजगार दिएको भजन गाउने सो कम्पनीमा जागिर खानेलाई समेत विभिन्न दुख दिने गरेको छ । गोल्छाको हंशराज–हुलाश चन्द्र गोल्छा एन्ड कम्पनीको काम पनि उही चौधरीकै पथमार्गमा रहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् । चौधरीलाई उन्मुक्ति : ६१५ करदातामाथी विभागको कारवाही